Inona no anjara lehibe indrindra amin'ny Fampandrosoana Page Landing?
Ny pejy fanentanana dia ivon-tseraseran'ny Internet. Raha miezaka mikarakara fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokalanao ianao, dia zava-dehibe ho anao ny mahafantatra ny fomba hananganana pejy SEO amin'ny tranonkala. Ity lahatsoratra ity dia fikasana hanazava ny fomba mety hanombohana pejy fananganana marina ho an'ny tetikasanao. Tohizo ny famakian-teny hianatra bebe kokoa momba ny fampiroboroboana ny pejy.
Fantaro ny olona mpividy anao
Ny fikarohana nataon'ny mpampiasa dia ampahany manan-danja amin'ny fizotry ny famoronana pejy. Noho izany dia tena tsara ny mamantatra ny mety ho mpanjifanao voalohany. Tadiavo ny karazana mpampiasa mitsidika ny tranokalanao. Eritrereto ny zavatra ilain'izy ireo, mamantatra izay mahatonga ny fiainany ho sarotra sy manome azy vahaolana tsara.
Ny fananana olona (solontenan'ny sary) dia fomba tsara indrindra hahafantarana ny mpihaino anao. Raha manao izany ianao, dia ampahafantarinao ny mpanjifa anao. Raha vao mieritreritra azy ireo ianao, dia mifantoha amin'ny famantarana ny teny fikarohana izay miditra ao anaty boaty fikarohana rehefa mitady vahaolana amin'ny olany. Eritrereto koa ny isan'ireo fitsidihana azonao andrasana amin'ny fikarohana samihafa isam-bolana.
Rehefa manana sarin'ny mpanjifanao amin'ny hoavy ianao sy ny fomba ahafahan'izy ireo mitady ny vahaolana dia azonao atao ny manomboka manangana pejy.
Fampandrosoana ny tontolon'ny sehatra: fitarihan-dàlana
Ireto misy fitsipika sasantsasany tokony harahinao rehefa manorina pejy pejy ianao:
Tsy ho an'ny fitaovan'ny fikarohana
Ny zavatra tena manan-danja izay mahakasika ny isa misy anao amin'ny Google dia ny maha-zoky ny olona amin'ny pejy web anao, fa tsy ny bots. Araka ny fampisehoana, tranonkala tsy misy SEO no hanao tsara kokoa noho ny ratsy amin'ny SEO. Tsarovy ny fitsipika volamena: manao pejy ho an'ny olona ianao fa tsy mitady milina. Mifantoha amin'ny fanatsarana ny tranokalanao ho an'ny mpampiasa voalohany. Ny pejy mahaliana kokoa sy manintona kokoa, dia ny olona mety kokoa no mankafy azy io. Ny fanatsarana ny pejy fanentanana nataonao ho an'ny mpampiasa dia hanana fiantraikany mazava sy maharitra amin'ny lozam-pikarohana karohinao.
Ny votoatin'ny tranonkala
Ny endriky ny pejy fananganana anao dia tokony haneho ny maha zava-dehibe ny votoatinao. Izany dia rehefa miditra HTML ny semantic. Ireo tags Semantika dia manampy ny olona hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny zavatra atolotrareo azy. Ny tags HTML Semantic dia mahatonga ireo mpitsidika maro kokoa hiditra kokoa sy handany fotoana bebe kokoa amin'ny tranokalanao. Izany, ho setrin'izany, dia mari-pamantarana matanjaka ho an'ny karoka fitadiavana.
Mamorona snippets ho an'ny mpampiasa
Ny fitaovana maoderina mahomby izay manampy ny SEO ihany koa dia manome koa mpampiasa sy milina piarahamonina. Ireo sombin-tsoratra fohy sy fampahafantarana dia mamela ny tranokalanao ho hita amin'ny valin'ny fikarohana Google amin'ny fomba mibaribary. Rehefa vita ny famakianao dia araho ny pejy fandrahonana anao. Azonao atao ny mampiasa ny Search Console mba hahitana ireo fehezanteny fototra misy ifandraisany amin'ny votoatiny. Ankoatra izany, ity fitaovana webmaster ity dia mampiseho ny rohy mankany amin'ny tranonkalanao ary koa ny fikarohana ny fanontaniana dia mandefa anao ny fifamoivoizana indrindra.
Ireo no fototry ny fampandrosoana pejy. Rehefa vita ny famolavolana ny pejy fananganana sy ny famoronana ny votoatiny dia mila mandinika izany ianao. Mba hanaovana izany dia mila manangona antontan-kevitra betsaka araka izay azo atao ianao. Ireo manam-pahaizana Semalt dia manoro hevitra amin'ny fampiasana ny Google Analytics - ity tolotrasa ity dia ahafahana maneho ny fihetsika sy ny fifampiresahana amin'ny loharano iray manokana. Ary koa, ny Google Analytics dia tonga lafatra amin'ny famantarana ny hetsika tsara indrindra amin'ny fandraisana ny mpampiasa sy ny toerana hanatsarana azy Source .